Ukuphupha i-Pegasus ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
U-Pegasus, ihashe elinamaphiko, uvela kwiintsomi zamaGrike kwaye kuthiwa uvele kunxibelelwano phakathi kothixo wolwandle uPoseidon kunye no-gorgon Medusa. Intsomi ithi umthombo weHippocrene, othathwa njengomthombo weempembelelo kwiimbongi, wenziwa yiminqwazi yazo.
Pegasus ke kwakhona luphawu lwemibongo. Ekwindla, uPegasus ubonakala njengekroza esibhakabhakeni. Ihashe elinamaphiko sele libonakalisiwe ngobugcisa kumaxesha amandulo kwaye lihlala liyinto ethandwayo kwimifanekiso emininzi, kodwa nakwizinto zemihla ngemihla. Ihashe elineempondo kunye namaphiko laziwa njengeyunicorn.
Nabani na ophupha ihashe likaPegasus akanyanzelekanga ukuba aziqhelanise neentsomi zamaGrike. Mhlawumbi umphuphi ubone umfanekiso okanye imuvi emchukumisileyo. Ukuya kwinqanaba elingakanani uPegasus njengophawu lwephupha olunentsingiselo ephupheni, kukhokelela ekutolikeni kwephupha ukusuka kumxholo jikelele wephupha.
1 Uphawu lwephupha «Pegasus» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Pegasus» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Pegasus» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Pegasus» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Ukutolikwa kwamaphupha, uPegasus luphawu lwephupha Libertad Umgangatho wokugqwesa. Ukuphupha kukuzithemba nokuzimisela. Ufundile ukucela umngeni kwimida yangaphakathi kunye nokuphuhlisa ulwazi olungenamda. Oko kukunceda ujongane nemiceli mngeni emitsha. izicwangciso zokudala indibano.
Kwinkcazo edumileyo yamaphupha, isimboli yamaphupha nayo isenokuba isilumkiso sele uza kuhamba. Mhlawumbi ukuphupha kuzama ukufezekisa okungenakwenzeka.
I-Pegasus ihlala iluphawu ngamaphiko ayo ekuchazeni amaphupha. ubuchule y Ukuphefumlelwa. Enye into, ukulala kunokuba sisikhumbuzo sokuthatha ikhefu emsebenzini ukuze uphinde ufumane amandla. Kwelinye icala, ubuchule balo mfuziselo wamaphupha luphawu lokuba ukuphupha kuyakwazi ukufezekisa iminqweno kunye nokunyuka ngaphezulu kwehlabathi elihlambeleyo.
Iimpiko zeentsiba zikaPegasus zisephupheni ngaxeshanye luphawu lobuncinci kunye neerudition. Ekuchazeni amaphupha, ihashe elinamaphiko sisimemo sokukhula ngaphaya kwakho.
Uphawu lwephupha «Pegasus» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha «Pegasus» luquka ubuhle kunye amandla ekuchazeni amaphupha. Kwimeko yezengqondo ikwamele eyantlandlolo, amandla obomi obuqalayo lomntu. Ephupheni apho uPegasus adlala khona, ukubonakalisa inkanuko yesini kunye neyesini, kodwa kunye nesantya kunye nokukwazi ukufikelela kwimpumelelo.
Kwiphupha lokuphupha, uphawu lwephupha, kwelinye icala, lunokuba luphawu lweenkanuko ezingachazwanga. Kwelinye icala, ungachaza ngokuchaseneyo: iphupha liseluxolweni kunye nokuziphatha kwakho ngokwesini kwaye uziva ulinganiselwe ngokwengqondo. Isigqibo ekuchazeni iphupha bubuntu bephupha kunye neemvakalelo ezihamba nophawu lwephupha «Pegasus».
Uphawu lwephupha «Pegasus» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "uPegasus" kutoliko lamaphupha ngumzobo onokuhambisa iphupha ulikhuphe kwihlabathi lasemhlabeni uye kwindawo egqithileyo.
Ihashe elinamaphiko limele njengoMdali wemithombo yokusulungeka kwamanzi, leyo yokuphupha ukomelela kokomoya nokomoya ikunika kwaye ikunceda ukhule ngaphezu kwakho. Uphawu lwephupha luphawu lobulumko, ukomelela, isibindi, kunye nokukwazi ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokomoya.